अक्सीजन प्लान्ट विस्फोट : टुक्रा–टुक्रा बनेर उछिटिए मृतकका अंग, कसरी घट्यो घटना ? (भिडियोसहित) – Annapurna Post News
April 21, 2022 sujaLeaveaComment on अक्सीजन प्लान्ट विस्फोट : टुक्रा–टुक्रा बनेर उछिटिए मृतकका अंग, कसरी घट्यो घटना ? (भिडियोसहित)
पाटन औधोगिक क्षेत्र भित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्ट भित्र विहीवार कारुणीक दृश्य देखियो । अरु बेला जस्तै नियमित रुपमा कामदारहरु आफ्नो काम धमाधम गर्दै थिए । ग्यास भर्ने काम चलिनै रहेको थियो । अक्सिजन ग्यास भर्दै जाँदा झण्डै १ दर्जन खाली सिलिण्डर बाँकी रहेको बेला प्लाटमा आज बिहान एक्कासी विस्फोट भयो । विस्फोटको आवाज औधोगिक क्षेत्रभरी फैलियो । एकै छिनमा सेना, प्रहरी र स्थानिय, भेला भए । विस्फोट लगतै सेना प्रहरी उद्धारमा लागे । विस्फोट हुदा भारतीय नागरिक वर्ष ४५ का बृज महतोको घटनास्थलमै ज्यान गयो । हामी घटनास्थलमा पुग्दा विस्फोटमा परेका उनको शरिरनै क्षतविक्षत भएको अवस्थामा प्रहरीले शव संकलन गरिरहेको थियो ।
उनको शरिरका अंगहरु सय मिटर पर सम्म उछिटिएका थिए, शरीरबाट छुटिएको केही चोइटो त रोकिराखेको गाडी पछाडी भेटिएको थियो । घटनास्थलमा भेला भएकाहरु भन्दै थिए । उ त्यो गाडी पछाडी पनि चोइटो छ । विपत्तको यो घडीमा घाइतेलाई अस्पताल दौडाईयो । नजिकैको पाटन स्पताल लगिएका ७ मध्ये ६ जना सामान्य उपचार पछि घर फर्किएका छन् भने अर्का एक भारतीय नागरिकको पनि मृत्यु भएको छ । चिन्ताजन अवस्थामा अस्पलता पुर्याइएका भारतीय नागरिक वर्ष २५ का राजकमार महतोको उपचारका क्रममा पाटन अस्पतालमा ज्यान गएको हो ।
विस्फोटमा परी ६ जना नेपाली घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरुमा पर्सा घर भई अक्सिजन प्लान्टमा कार्यरत ४३ वर्षीय रमेश अधिकारी, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका ८ की ३६ वर्षीया दुर्गा पुरी, गोदावरी नगरपालिकाका १९ वर्षीय सुदिप तिमल्सिना, महांकाल गाँउपालिकाका २२ वर्षीय ईश्वर बजगाई, ओखलढुंगाकी २० वर्षीय अञ्जना पौडेल र चन्द्रागिरी नगरपालिकाका ४९ वर्षीय गंगाराज शर्मा रहेका छन् । घाइते सबै उचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् ।
घटनास्थल हेर्दा विस्फोटले क्षतविक्षत भएको छ । जस्ता पाताले घेरिएको प्लान्टका जस्ताहरु यत्रतत्र छरपस्ट भएका छन् । कार्यालयको सिसा फुटेर जताततै छरपस्ट छ । विस्फोटले प्लान्टक्षेत्र पुरै उजाडिएको छ भने धेरैको अनुहार मलिन देखिएको छ । सायद कामदार पनि प्लान्ट भित्रै बस्छन् होला
कतिका लुगा त बारदलिमै हावासँगै झुलिरहेको थियो । विहानैको यो घटनाले एकै छिनमा ललितपुरमा सन्नाटा छायो ।
ललितपुर मात्रै हैन काठमाण्डौ र भक्तपुरलाई पनि यो घटनाले खिच्यो र सबैको दौडादौड चल्यो। प्लान्ट भित्र काम गर्दैगर्दा विस्फोटमा परेर घाईते भएकी ओखलढुंगाकी २० वर्षीय अञ्जना पौडेल उपचार पछि फेरि घटनास्थलमै पुगेकी थिइन् । आफ्ना केहि सामानहरु भित्र रहेको भन्दै प्लान्ट क्षेत्रमा पुगेकी उनि मलिन उनुहार लिएर हातमा लागेको चोट देखाउदै बोल्न गार्हो भएको भन्दै थिइन् ।सँगै काम गर्ने साथी विस्फोटमा परेर क्षतविक्षत भएर मृत्यु बरण गर्दा कस्को पो अनुहार मलिन नहोला र । सगरमाथा अक्सिजन प्लान्ट भित्र काम गर्ने भारतीय नागरिक सरोज कुमार सिंह घटनामा परेर आफु आफु बालबाल बाँचेको भन्दै थिए ।
प्रस्ट सँग नेपाली बोल्न नजान्ने उनि इण्डियन भाषामा भन्दै थिए म पनि दुई मिनेट ढिलो भएको भए सायद यो संसारमा नरहन सक्थे । दुई मिनेटको फरकले म बाँचे । आफ्ना दुई जना भारतीय साथी गुमाएका उनि घटनास्थलमा यसै टोलाई रहेका थिए ।